उत्साह छर्ने प्रयास गर्दै नेप्से, सूचकका साथमा खरिदबिक्री रकम पनि बढ्यो – Esewanews
Home / Headline / उत्साह छर्ने प्रयास गर्दै नेप्से, सूचकका साथमा खरिदबिक्री रकम पनि बढ्यो
Shivaram Khadka Headline, अर्थ, राजनीति, समाचार Leaveacomment 4752 Views
अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो कारोबार दिन सेयर बजारले उत्साह भर्ने काम गरेको छ । आइतबार नेप्से सूचकमा आकर्षक वृद्धि हुँदा खरिदबिक्री रकम समेत विस्तार भएको छ । यस दिन नेप्से सूचक ६०.४१ अंकले बढेर २५८४.९१ विन्दुमा आइपुगेको छ । ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा त्रमिक सुधार देखिन थालेपछि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको मनोबल पनि वृद्धि हुँदै गएको छ ।
करिब ४ महिना अवधिमा झन्डै ३० प्रतिशतले घटेको बजार विस्तारै लयमा आउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । बजार विश्लेषकहरुले विभिन्न तथ्य र आँकडाहरुलाई आधार मानेर विभिन्न उतारचढावहरुका बाबजुत पनि समग्रमा बजार विस्तारै अपट्रेन्डमा जाने अनुमान लगाएका छन् । हाम्रो सेयर बजारलाई सधैं नीतिगत विषयले प्रभाव पार्दै आएको छ । यसअघि पनि केन्द्रीय बैंककै सेयर धितो कर्जाको सीमाका कारणले बजार ओरालो लाग्न थालेको थियो ।
यही बेला बजारमा तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धि पनि भयो । यसले बजारलाई झनै अप्ठेरोमा पारेको थियो । तर अहिले फेरि नीतिगत परिवर्तनहरु गरिएका छन् । तरलता सहज पार्ने टुल्सहरुको पनि प्रयोग गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आयातमा कडाई गरेको । डलर सटहीमा कडाई गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने बजेटको ८०% सम्म रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिएको छ । यस्तै, बैंकहरुले पुसमा ब्याजदर बढाएका छैनन् । बजारमा सेयर भाउहरु निकै सस्तो भइसकेको छ । बुल रन जारी रहेको विश्लेषणहरु भइरहेका छन् । यी तथ्यहरुका आधारमा लगानीकर्ताहरु उत्साहित बनेको अनुमान गरिएको छ । आम लगानीकर्ताले सकेसम्म सबल वित्तीय सूचक भएका कम्पनीहरुमा आधारभूत अवस्था अध्ययन गरेर भ्याल्यू इन्भेष्टमेन्टको अवधारणालाई अवलम्बन गर्न सके बजारबाट लाभ लिन सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ । लगानी गर्दा कम्पनी छनोटमा भने विशेष ध्यान दिन विज्ञहरुले सुझाव दिने गरेका छन् । कम्पनीको नाफा, रिजर्भ, लाभांश क्षमता, इपीएस, पीइ रेसियोका साथमा व्यवसाय विस्तारको सम्भावनातर्फ पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेका वित्तीय विवरणहरु, सम्बद्ध कम्पनीको व्यवस्थापन र सञ्चालकहरुका बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ ।
यस्तै, सम्बद्ध क्षेत्रमा व्यवसायको अवसर र प्रतिस्पर्धा, कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी कति छ ? नियमनको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने विषयतर्फ पनि अध्ययन गर्न अनुभवीहरुले सुझाव दिने गरेका छन् । लगानीकर्ताले कुन उद्देश्यले सेयर किन्ने हो ? आफू इन्भेष्टर र कि ट्रेडर भन्नेसमेत ध्यान दिंदै सोही अनुसार रणनीतिहरु तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस दिन २४० कम्पनीको ७१ लाख ६० हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । २ कम्पनीको भाउमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । खरिदबिक्री रकमममा ४४ करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीसहित हिमालन डिष्टिलरी अग्रस्थानमा रहेको छ । यसैगरी, दोस्रोमा नबिल बैंक र तेस्रोमा नेपाल बंगलादेश बैंक परेका छन् । बिमा, विकास बैंक लगायतका समूहमा पनि आकर्षक सुधार देखिएको छ ।